Jesosy dia tonga ho an'ny olona rehetra - Church of God Switzerland of the Worldwide
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-02 > Tonga ho an'ny olona rehetra Jesosy
Matetika no manampy ny mijery akaiky ny andinin-teny. Nanao fanambarana manaitra sy mahafaoka ny zava-drehetra i Jesosy, nandritra ny resadresaka tamin’i Nikodemosy, manam-pahaizana ambony sady mpanapaka ny Jiosy. “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” (Jaona. 3,16).
I Jesosy sy i Nikodemosy dia nihaona tamin'ny dingana iray - isaky ny mpampianatra ka hatramin'ny mpampianatra. Nanaitra an'i Nikodemosy ny fanaporofoan-kevitr'i Jesosy fa ilaina ny fahaterahana faharoa mba hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nanan-danja io resaka io satria i Jesosy, amin'ny maha-Jiosy azy, dia tsy maintsy nifampiraharaha tamin'ny Jiosy hafa ary, toy ny tamin'ity tranga ity, indrindra ireo mpitondra ambony.
Andao hojerentsika izay hitranga manaraka. Manaraka izany dia misy fihaonana amin'ilay vehivavy eo amin'ny fantsakan'i Jakôba ao Sykara. Dimim-panambadiana izy ary izao dia nanambady olon-droa izao, izay nahatonga azy ho lohahevitra resaky ny olona. Ho fanampin'izay dia Samaritana izy ary anisan'ny firenena nolalovan'ny Jiosy sy nisorohany. Fa maninona Jesosy, raby, no niresaka tamin'ny vehivavy amin'ny olona rehetra, izay tsy mahazatra, ary tamin'ny vehivavy samaritana an'ny olona rehetra? Tsy nanao izany ny raby manan-kaja.
Rehefa afaka andro vitsivitsy, izay nandanian'i Jesosy teo amin'izy ireo araka ny fangatahan'ny Samaritana, dia nifindra nankany Kana any Galilia izy sy ny mpianany. Tao no nanasitranan'i Jesosy ny zanaky ny tandapa iray, izay nilazany hoe: "Mandehana, velona ny zanakao!" Ity tompon'andraikitra ity, azo antoka fa aristocrat manankarena, nanompo tao amin'ny lapan'i Heroda Mpanjaka, ary mety ho Jiosy na mpanompo sampy. Noho ny fananany rehetra dia tsy afaka namonjy ny zanany efa ho faty izy. Jesosy no fanantenany farany sy tsara indrindra.
Nandritra ny fotoana nijanonany tety an-tany dia tsy fanaon'i Jesosy ny nanao fanambarana mahavariana momba ny fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra ary mijanona eo aoriana. Ny fitiavan'ilay Ray dia naseho ampahibemaso tamin'ny alàlan'ny fiainana sy ny fijalian'ny Zanany lahitokana. Tamin'ny alalan'ireo fihaonana telo ireo dia nanambara i Jesosy fa tonga ho an'ny "olona rehetra" Izy.
Inona koa no ianarantsika avy amin’i Nikodemosy? Nahazo alalana tamin’i Pilato i Josefa avy any Arimatia, ka naka ny fatin’i Jesosy ary niaraka tamin’i Nikodemosy. “Fa tonga koa Nikodemosy, ilay nanatona an’i Jesosy tamin’iny alina iny, ka nitondra miora voaharo hazo manitra tokony ho zato livatra. Dia nalainy ny fatin’i Jesosy ka nofonosiny hariry madinika mbamin’ny zava-manitra, araka ny fanaon’ny Jiosy handevenana” (Jaona 1.9,39- iray).
Tamin'ny fihaonana voalohany dia nanatona ny Zanak'Andriamanitra tao ambanin'ny aizina izy, ankehitriny dia mampiseho fahasahiana amin'ny mpino hafa mba handamina ny fandevenana an'i Jesosy.